Yikuphi okungcono: insingo noma epilator? Uphenyo abesifazane abaye bazama kokubili izindlela ukususa uboya obungathandeki
Nobuhle nokucwala anikele ezihlukahlukene amasevisi ukuthuthukisa ukubukeka kwabo. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ungakwazi ukufeza umphumela oyifunayo hhayi kuphela gumbi, kodwa futhi enye yezindlela ekhaya. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi onjalo zikagesi ethandwa ephezulu ubuhle, kuhlanganise lisebenze. Izimpendulo ngaye kungatholakala ngenye indlela ehluke kakhulu. Miphi zilungele kakhulu iqiniso ngale ndaba?
Kanjani lisebenze futhi odinga ukukwazi mayelana nale divayisi ngaphambi kokuthenga
Le divayisi kususa izinwele ngokweqile by abahluthula kubo. Akunzima ukuqagela ukuthi inqubo kubuhlungu ngempela. Ngenxa yalesi sizathu, kunengqondo ukukhetha idivayisi ngejubane eliphezulu kakhulu. Kufaka futhi amathiphu ukwehlisa ubuhlungu. Abakwazi ukwehlisa ukushisa esikhumbeni noma elula. Uma-ke kukhona ukuthi akazi ukuthi yakho epilator, ngempela abesifazane esebenzisa onobuhle amadala, kuzokusiza ukukhethwa. Thola ekunciphiseni ukuzwela ukhilimu wedwa noma kuphole isikhumba ngokushesha ngaphambi inqubo usebenzisa naseqhweni. Abanye abantu bakhetha ukuba basuse izinwele ngokushesha ngemuva ukugeza ngamanzi afudumele. Ungesabi ukuba ulinge.
Indlela ukukhetha epilator? Izibuyekezo ukuncoma abanikazi amadivayisi, ngaphezu isigubhu nesivinini amashiya, sinake umakhi. Akubalulekile ukuba makudle amamodeli okungenani ezibizayo lemikhiqizo engaziwa. Ngaphandle electrodepilator classical, ukuyikhipha izinwele, emakethe angathola futhi laser nozakwabo.
Ikhaya yokukhipha izinwele zomzimba: ukubuyekezwa kanye ulwazi mayelana amathuluzi
Kusukela labo abaye bazama kule divayisi isinyathelo, ungezwa imibono impikiswano kakhulu. Abanye besifazane abangamaRom babesizakala esuka kuye injabulo engachazeki, abanye ziyaqiniseka lusizo yayo ephelele. laser hair ukususwa salon ukunikela nge imishini yobuchwepheshe ezibizayo. Kodwa ngisho nangaphansi kwezimo ezinjalo kudingeka ukuchitha izikhathi, ngamunye ephethe amba eqolo. Khona-ke, njengoba idivayisi ukusetshenziswa ekhaya angathengwa kakade i-ruble ayizigidi 10, futhi isikhathi ukusetshenziswa isikhathi eside ngokwanele. Kodwa khumbula ukuthi laser epilators zihlukaniswe amaqembu amabili: inqubo ikani lokuqala ngesikhathi esisodwa endaweni ethile kwesikhumba, kanti enye ithatha isikhathi iphuzu kwi izinwele. Amadivayisi yohlobo yokuqala kakhulu ngaphezulu ezibizayo. Futhi ukuze ufunde ukususa kanjani ngempumelelo acupressure izimila epilator, zidinga amakghono anqophileko.
Razor noma epilator? Izibuyekezo
Plus ukushefa e ukutholakala kwayo Akudingi impahla eyengeziwe. Inqubo kuthatha isikhathi esincane, ngokushesha ngemva kwesikhumba ikhange, futhi asikho isidingo ukulinda kuze ukucasuka pass. Epilator Izibuyekezo kuyinto okuphambene: Ngosuku lokuqala ngemva izinwele ukususwa, kubo bonke ubuso iphathwa embozwe amachashazi elincane elibomvu, kuyilapho abanikazi ibuthaka isikhumba ukucasuka ongama izinsuku ezintathu. Inkinga ezivamile - izinwele ingrown, kodwa uma ulandela ezinye imithetho Ukuzinakekela, ke kungagwenywa. Uzokwenza kufanele kuphawulwe ukuthi ngesikhathi ukushefa njalo singenzeka ukucasuka noma izinwele ingrown. Kulokhu, plus ocacile phambi ukushefa izinwele ukususwa wukuthi kungenzeka ukwenza inqubo kuvamile kakhulu.
Izinwele nokomisa Bosch PhD 2511: Sibutsetelo imodeli, intengo, ukubuyekezwa
Ingabe ngidinga ebhodweni endlini bayobhaka?
Ngaphambi kweMoscow "iDynamo" iVladimir Rykov
Enemininingwane INCAZELO smartphone "Nokia 603"
Technique Bass-Darky. Indlela ekuxilongeni incazelo ulaka incazelo umgomo yemiphumela
Engadini Fern: zikanokusho "uyintombazane"
Acidosis Acid Face: izinkomba kanye yokusetshenziswa, ngempela